Google Glass 2.0: izithombe kuqala ziyaphuma - Izindaba Rule
Google Glass 2.0: izithombe kuqala ziyaphuma
Le nguqulo entsha ye computer ikhanda agibele amahhashi Google liye kuvele ngesikhathi nokufakwa kuhulumeni.
Lesi sihloko osesikhundleni “Google Glass 2.0: izithombe kuqala ziyaphuma” lalotshwa Alex Hern, ngoba theguardian.com ngoLwesibili 29 Disemba 2015 12.19 UTC
Naphezu ebulala it off ekuqaleni kwalo nyaka, I-Google uye wembula inguqulo entsha ye-Glass yayo computer okugqokekayo, okuhloswe ngqó amabhizinisi ibhizinisi ezifana kwezempilo kanye yokukhiqiza.
In imvuthuluka ne-American federal ikhomishana yezokuxhumana, ngokuqinile search has eyanyatheliswa izithombe zokuqala zedivayisi kabusha, okuyinto manje sibonisa ingalo foldable ephethe screen olukhudlwana.
Esinye isithombe esisha se-Google Glass hardware. Photograph: FCC /-Google
ngokusemthethweni, I-Google akuzange wavuma ukhona idivayisi entsha sika, naphezu kweqiniso lokuthi Qalisa kabusha yayo ibhizinisi-egxile bekulokhu ulwazi umphakathi kusukela ngo-July. Labo amahlebezi futhi wasikisela ukuthi inguqulo entsha ye-Glass yakhiwe ibe manzi silifihle kanzima-egqoke, kanye kulindeleke tech uhlevane like WiFi kangcono, izilimi ngokushesha, nekhamera kwetinhlelo letentiwe ncono kanye nebhethri.
The last inkampani akushilo kwi ndaba ukuthi Glass kwaba "ababethweswa iziqu:" esikhundleni salo zokuhlola advanced ucwaningo X division ye-Google, futhi ibekwe ngaphansi kokulawula Tony Fadell, indoda ngemuva iPod futhi Nest inkampani smart ekhaya.
I uqalisa zilandelwe kamuva inguqulo entsha umthengi. Kodwa ngoba manje, idivayisi uzobe okuhloswe ngaso amakhasimende ibhizinisi labo abazuza value ngokushesha ngenxa yokungabi umbukiso inhloko-agibele amahhashi. Obvious ukusetshenziswa-amacala ahlanganisa ukuhlinzwa nokukhiqiza, lapho hands-free ukufinyelela screen izwi elawulwa kungaba wusizo kakhulu. Re-sethula endaweni yebhizinisi futhi zibavumele inkampani ukuze sigweme ukuba abhekane eziningi izimpikiswano olutholwa abasebenzisi umthengi, ikakhulukazi kobumfihlo kwaqubula ngokugqoka ikhamera ikhanda aboshelwe ezindaweni zomphakathi.
21246	0 Alex Hern, Isigaba, Google, Google Glass, Izindaba, Technology
← Will 2016 Makube unyaka lapho ngokoqobo virtual udlala Ukhumula? The 25 iningi Kulindeleke isiqophi imidlalo 2016 →